मध्यमार्गी विकल्प निकाल्दै सकियाे स्थायी कमिटी बैठक – Himalaya TV
Home » राजनीति » मध्यमार्गी विकल्प निकाल्दै सकियाे स्थायी कमिटी बैठक
मध्यमार्गी विकल्प निकाल्दै सकियाे स्थायी कमिटी बैठक
१४ पुष २०७५, शनिबार १८:०१
काठमाडाैं । मध्यमार्गी विकल्प समातेपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुखदरुपमै सकिएको छ । तर, बैठकमा उठेका केही महत्वपूर्ण प्रश्नको सिधा सिधा जवाफ आएको छैन् । बरु, अध्यक्षद्धयको कार्यशैली र निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने नेताले फेरि पनि अन्तिम निर्णयको अधिकार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै सुम्पेका छन् ।
आधा दर्जन निकै महत्वपूर्ण प्रश्न उठेपनि नेकपाको बैठकले त्यसको नगद सम्बोधन गरेगरेन, बरु ओली र प्रचण्डले चेकमै कारोवार गर्नुभयो । लामो समयसम्म बक्यौता रहेका मुद्दामा चेक पाउदा नै असन्तुष्ट नेता मख्ख छन् ।
विगतमा चेक बाउन्स भएर धोका पाएका नेतालाई यसपाली ओली र प्रचण्डले कसम नै खाएर विश्वास दिलाउने कोशिष गरेका छन् । त्यसैले असन्तुष्ट नेताको विश्वास पलाएको छ ।
एसिय प्यासिफिक समिटिवारे प्रधानमन्त्रीको आत्मआलोचना आउँछ कि आउँदैन ? -प्रदेश कमिटीको नाम हेरफेर हुन्छ कि हुँदैन ? -सरकार र पार्टीबीचको समन्वय कसरी हुन्छ ? -मन्त्रीमण्डलको पुर्नगठन हुन्छ कि हुँदैन ? बैठक सकिए पनि मुद्दा चाहिँ कायमै छन् ।
फरक मतको सम्बोधन, एसिय प्यासिफिक समिटिमा सरकार र नेकपाको सहभागितामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका, यस अघि टुंगाइएको प्रदेश कमिटीको नाम हेरफेर र सरकार र पार्टीबीचको समन्वयवारे परिमार्जित प्रतिवेदनमा के आउला ? सवैको चासो अब यीनै प्रश्नमा छ । बैठकपछि झलनाथ खनाल उत्साही देखिनुभयो ।
बामदेव गौतम बैठक सकिने दिन पनि मौन बस्नुभयो । र, प्रवत्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अलमलमा देखिनुभयो । त्यसैले नजर फेरि पनि ओली र प्रचण्डमाथि नै छ ।